Kugqabuke igoda kumaZulu neMabhida - Ilanga News
Home Ezemidlalo Kugqabuke igoda kumaZulu neMabhida
USuthu seluthuthele eJonsson Kings Park Stadium
UPHELILE umshado phakathi kwaMaZulu FC agijima kwi-Absa Premiership neMoses Mabhida Stadium njengoba kuvela ukuthi le kilabhu isifudukele ekhaya elisha.
USuthu okungenye yamakilabhu ahlonishwayo ebholeni lakuleli, beluzinze eMoses Mabhida Stadium, njengoba belujimela ezinkundleni zakhona, kanti namahhovisi ale kilabhu abezinze kule nkundla.
Nokho ngeledlule le kilabhu eholwa nguDkt Patrick Sokhela ithuthile kule nkundla njengoba kuvela ukuthi kunezinto ebeyingathokozile ngazo.
Phakathi kwazo kubalwa ukuthikamezeka kwezinhlelo zayo uma kuyimiqhudelwano emikhulu njengeCosafa Cup lapho le kilabhu ibizithola ingasenayo indawo yokujimela.
Kuvela ukuthi le kilabhu ifudukele eJonsson Kings Park Stadium, okuyilapho esijimela khona, kanti nemidlalo yayo yasekhaya kuvela ukuthi isizoyidlalela khona.
Namahhovisi ale kilabhu asethuthele khona eKings Park.
Leli phephandaba lishayela iBrilliant Mkhathini wezokuxhumana kumaZulu ngalolu daba, ukuvumile ukuthi ikilabhu isithuthile eMabhida kodwa wathi abahambanga kabi.
“Ngingakuqinisekisa ukuthi umshado wethu neMabhida uphelile kodwa awuphelanga kabi, kuphele inkontileka sanquma ukungayivuseleli.
“Empeleni sibatshele kudala ukuthi ngeke siyelule ngenxa yezizathu ezithile.
“Besifuna ukuba sendaweni lapho esingeke sithikamezeke khona. Kusukela manje ikilabhu izozinza eKings Park iyona esizoba yikhala loSuthu,” kusho uMkhathini.
Previous articleKutuswa owesilisa ofe nezinswelaboya ebezimduna imoto
Next articleIqubule ingebhe eyokubulawa kwabesifazane